I-Quicklink iyanda eMelika ngokuvulwa kweofisi yaseMelika | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » iindaba » I-Quicklink iyanda eMelika ngokuvulwa kweofisi yase-US
Quicklink, umboneleli okhokelayo wehardware kunye nesisombululo sesoftware kwividiyo nakwigalelo lokumamela, ubhengeze ukuvulwa kweofisi yabo yase-US, kulandela ukukhula okukhulu kwenkampani kulo mmandla.
Ukuvulwa kweofisi entsha eHackensack, eNew Jersey, komeleza ukuthengisa, iinkonzo kunye nenkxaso ye-Quicklink eMntla Melika. I-Quicklink ngoku iyakwazi ukubonelela ngenkxaso yasekhaya kubathengi ngokulungiswa kunye neenkonzo, kwaye iiyure zeqela leNkxaso elinobuhlobo kunye nolwazi luye lwandiswa. Ulwandiso lukwabandakanya ukubamba uluhlu lwezisombululo zokuphumelela amabhaso eCalifornia naseNew York.
URichard Rees, umphathi we-Quicklink uthe, "Sonwabe kakhulu ngokuvulwa kweofisi yethu yokuqala yase-US eNew Jersey. Ngoku sinakho ukubonelela ngenkxaso yendawo kunye neenkonzo nge-inventri ekhoyo yokufikelela kwangoko e-United States."
URichard wongeze, "Siye sabona ukukhula kweenkwenkwezi ngaphakathi eUnited States, kwaye ngenxa yoko, kwakubaluleke kakhulu kuthi ukwandisa imisebenzi yethu ukuze silungiselele iimfuno zalo mmandla."
I-Quicklink, izinze e-UK, ibonelela ngaphezulu kweenkampani ezingama-800 ngesoftware ephumelele amabhaso kunye nezisombululo ze-IP zehardware. NjengeBhaso likaEmmy kunye neBhaso likaKumkanikazi labaphumeleleyo kwi-Innovation, i-Quicklink iyazingca ngokwamkelwa kwizisombululo abaziphuhlisayo kwihlabathi liphela. www.quicklink.tv
Imisebenzi ye-Quicklink yase-US ngoku ivulekele ishishini kwaye inokufikelelwa ngomnxeba ngokufowunela 1- (551) -587-7692, okanye ngokuthumela i-imeyile [imeyile ikhuselwe].
I-Quicklink ingomnye wabanikezeli behlabathi abahamba phambili kwiisofthiwe kunye ne-hardware IP izixazululo zokudluliselwa kwevidiyo ephilayo neyiyo. Isisombululo sethu sisona sifanelekileyo kwiklasi yokufikelela kwividiyo ephezulu kakhulu kunye nomculo ovela kwi-speed speed ukuya kwi-IP. Ukulungiswa kwee-bandwidth ekhoyo usebenzisa isofthiwe ephezulu kunye nee-codec eziphucukileyo kuthetha ukuba iziphumo ezigqwesileyo zingenziwa kwiintlobo ezahlukeneyo.
Izithuba ezandwendwe nge-quicklink (ndinibone nonke)
I-Quicklink iyanda eMelika ngokuvulwa kweofisi yase-US - Februwari 22, 2021
IBlue Spark Studios yazisa ngegalelo kude nabanikeli ngeSpecial Studio - Oktobha 26, 2020
USmyle uthathe iminyhadala ebukhoma kwi-Intanethi phakathi kwe-COVID-19 ngoncedo lwe-Quicklink Studio yeminikelo ekude - Septemba 14, 2020
Quicklink eunited States US 2021-02-22
Previous: I-MOD iqala itheko liqale kumdlalo omkhulu
next: I-Yangquan TV's I-4K entsha yeTrakhi ikhupha iiCobalt's 12G Solutions